Iindaba -Izinto ezinyulu zendalo
1. Ilaphu lelinen
Iilineni, ngaphandle kwemfuneko zokuthetha, ziqhutywa ziimpahla zasehlotyeni. Ivumela ulusu ukuba luphefumle, kodwa ikwaphefumla kakhulu ayikuniki ukubila okuxineneyo, akukho ngxaki yombane imileyo, ikwathambile ekubanjweni, abantu abagulayo bayathandana. Ngapha koko, ilaphu ngokwalo libiza kakhulu kwaye linomgangatho ophezulu, okwenza ukuba kube lula ukunxiba ehlobo.
Enye yeengxaki zelineni kukuba ithande ukushwabana. Ukuba unxiba ilokhwe esesikweni eyenziwe ngelinen emsulwa, nokuba i-ayiniwe ekuseni, iyakushwabana xa usiya kwintlanganiso yenkampani emini emaqanda.
Unokuthathela ingqalelo umqhaphu kunye nelaphu elixutywe ilaphu, jonga umxholo we-hemp ungaphantsi komqhaphu, njenge-60 yomqhaphu + i-30 hemp. Lo mbandela unemibongo emikhulu, ke ayikhangeleki ngathi ayithandeki njengokubongoza okuncinci, kodwa yongeza ubume. Ungayifaka kwikhabhathi yakho emva kokuba uyihlambulule, ngokungafaniyo nelinen emsulwa, efuna uku-ayina.
Amalaphu 2.Real isilika
Impahla yesilika emsulwa yintsomi ekhethekileyo intle kakhulu, nangona kunjalo unyamezelo lwesilika emsulwa ayikhuli, kuba ityheli, zoba ingxaki yesilika ukuvelisa, ufuna ukuthenga ukubuya uzonxiba igama elidala ngamaxesha aqhelekileyo kufuneka uthathe okhethekileyo inkathalo ekugcineni ucoceko. Akululanga kakhulu ukuyigcina, kodwa kuba ityibilika kakhulu kwaye ipholile ehlotyeni, uninzi lwabasetyhini luyayithenga.
Ukwazi iipropathi zayo, kuya kufuneka unike ingqalelo kwingxaki, isilika kunye nelinen njengoko kulula ukushwabana! Kwaye udidi lwesilika olusulungekileyo lukhethekile kakhulu, lube nesilika, isilikhi yaseJapan, isilika yaseFrance zonke iintlobo, phakathi kwazo ezineesilika kulula kakhulu ukuzenza.
Njenge-crepe enzima i-DE Chine, ixhaphake kakhulu kwisilika, umphezulu ubonakala ubume obucacileyo, obusetyenziselwa ukwenza iilokhwe, kwaye akukho lula ukugoba, kulula ukuyithenga kwintengiso.
Kukho uhlobo lwe-satin eyoluliweyo, kuba yongeza malunga ne-10 ye-spandex, ngoko ke yi-silika e-elastic, ehlala isetyenziselwa ukwenza iihempe, i-anti-wrinkle engenakoyiswa nayo ilungile kakhulu ukuyigcina, ungakhathazeki ngokuzinza.
Ilaphu le-3 yomqhaphu
Ilaphu lomqhaphu linefuthe lokufunxa ukubila, kodwa linokuthintela ngokufanelekileyo ukubila kwevumba, nxiba umzimba awuzukubila kulusu kuya kukhula irhashalala ebomvu. Hlamba ukuya kumatshini wokuhlamba ukuphosa, hlamba ikhabethe elungileyo elomileyo, unganikeli ngqalelo kwindlela.
Ixesha Post: Jul-18-2020